Ama-EFT Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Ukuphunyuka eTarkov kuzoba lula kakhulu uma usutholakale ngokukopela okulungile. Bheka i-EFT Aimbot, i-ESP, iWall Hack, ne-No Recoil!
Usuvele uthenge iHack EFT? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Sicela wazi: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-hacks ethu e-EFT, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kuvuselelwa noma lisasebenza ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu I-EFT Hacks
Ama-EFT Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks nokuningi
Thenga I-EFT Hacks in 4 izinyathelo
Khetha umdlalo ongathanda ukuwuthenga ukhiye womkhiqizo
Khetha i-hack efanele evumelana nezidingo zakho (EFT Aimbot, ESP, NoRecoil, njll.)
Yenza inkokhelo yakho usebenzisa izindlela zethu zokukhokha eziphephile (iprosesa ekhethekile itholakala kuphela ku-Gamepron)
Finyelela Ukhiye Wakho & Landa ama-Hacks EFT!
Thola ukufinyelela kuma-EFT Hacks akho ngokusebenzisa ukhiye wakho womkhiqizo bese ulanda ama-cheats ngokufanele
Kungani Usebenzisa i-Gamepron EFT Hacks?
I-Escape From isibuyekezo sakamuva sikaTarkov ifike eceleni kokusula kwakamuva komdlalo, futhi yengeza uTagilla kulo mdlalo, ongumfowabo kaKilla nomphathi wescav kuFektri. Ngaphandle kwalokho, uhlelo lokuqina kwezikhali seluqalisiwe, okwandisa amathuba okuthi isikhali sakho sizominyana njengoba silulaza.
Isibuyekezo sokugcina Escape From Tarkov besisikhulu, futhi bekungukusula okuke kwagconwa isikhathi nesikhathi. Izinguquko eziphawuleka kakhulu kulo mdlalo zifaka ukwengezwa kohlelo lwe-scav reputation, olunomgomo wokunciphisa udlame phakathi kwama-scavs. Okunye okungeziwe kufaka ukungasebenzi kahle kwezikhali.
Ngenkathi i-Escape From Tarkov isavuselelwa njalo ukusiza izimbungulu zesikwashi nezinye izingqinamba ezincane, umdlalo uhambe isikhashana ngaphandle kokubona isibuyekezo esikhulu. Abadlali bacabanga ukuthi i-BSG okwamanje isebenza kanzima isungula imigwaqo yemephu yaseTarkov kanti abanye abadlali balindele nokusula kungekudala, kepha lokho ukuqagela nje.
Ukuphunyuka e-Tarkov kuyisihloko esiletha bobabili abadlali abasha nabomakadebona ndawonye, ​​njengoba womabili amaqembu ezokhamuluka ngolaka ngesikhathi esithile! Kwakungadalelwanga ukuthi kube ngumdlalo olula, futhi lokho kusho ukuthi kuzokukhungathekisa kwesinye isikhathi - imidlalo yenzelwe ukuthi ibe mnandi, ngakho-ke kungani uzihlupha ngakho konke lokho kucindezeleka? Ungasebenzisa i-Escape yethu evela eTarkov Hack ukuletha amagalelo okubulala ngokuchofoza kwegundane lakho, njengoba i-EFT Aimbot yethu iyikho konke okudingayo ukukhipha abadlali abanekhono. Ukuzibophezela ekuhlaseleni ngaphakathi kwe-Escape from Tarkov kusho ukuthi uzochitha isikhathi esiningi ufunda imishini yomdlalo, kepha lokho akwanele! Ngisho nama-bots odinga ukubhekana nawo ahlelwe ukwenza impilo yakho ibe yisihogo esiphilayo, futhi kufanele sisho ukuthi, benze umsebenzi omuhle ngalokho.
Njengokungathi ufuna ukuklebhula izinwele zakho ngenxa yama- “Scavs” anikwe amandla akwanele, kufanele futhi ukhathazeke ngabadlali bangempela abachitha isipiliyoni sakho. Izitha zamakhompiyutha ezicathama emathunzini, ezilinde ukukuhlasela nganoma yisiphi isikhathi akusona ukuphela kosongo laphaya. Uma uphonsa abadlali bangempela engxenyeni kufanele ukhathazeke ngamanye ama-hacker, kanye nabantu abasebenzisa ama-smurf account.
Ungathembela ku-Gamepron ukuletha okungcono kakhulu kwe-EFT Hack, njengoba sineqembu lohlelo abazinikele abakha amathuluzi ethu amaningi. Uma singazenzelanga thina ukukopela, sisebenza ngokusondelene kakhulu nozakwethu abazokwenza kanjalo ngokwabo - nabo bagxila kwikhwalithi njengoba senza, ngakho-ke asikho isidingo sokukhathazeka! Asisiki amakhona futhi sinezici ezinjenge-Aimbot, i-ESP, iWall Hack, neNoRecoil, leli yithuluzi ongeke udumazeke ngalo.
Amathuluzi wethu awatholakali nhlobo, ngakho-ke wonke ama-akhawunti ohlela ukukopela nawo azohlala ephephile (inqobo nje uma usebenzisa i-Escape from Tarkov Hacks enikezwe yi-Gamepron!). Ukugcina abasebenzisi bethu bephephile kuhlale kuyinto eza kuqala kakhulu selokhu sethula le webhusayithi ngoba kungani uzihlupha ngokugenca uma uzovinjelwa cishe ngokushesha? Sikuvumela ukuthi ungene futhi ugcine yonke inqubekela phambili oyisebenzele kanzima ukuyithola, okuyilokho bonke abaduni abafuna kakhulu ekukhohliseni kwabo kwe-EFT. Ukulungele ukuba yinkinga emhlabeni we-Escape from Tarkov? Thola ukufinyelela kuma-EFT Hacks wethu namuhla!
I-EFT Wall Hack (ESP)
Imininingwane ye-EFT Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Into ye-EFT ESP enezihlungi
Izexwayiso zesitha se-EFT
Imodi ye-EFT super jump (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe).
EFT bone & aim key key okulungisekayo.
Isinxephezelo se-EFT Recoil
Impela I-EFT Hack Izici
Sebenzisa i-Escape yethu kusuka kuTarkov Player ESP ukubona izitha ngokusebenzisa indawo eqinile ne-opaque! Ungahlela ukuhlaselwa kwakho ngokunemba usebenzisa i-Gamepron.
Futhi esinye isici esisebenziseka kahle kakhulu kungaba yi-Player Information ESP, ekuvumela ukuthi ubone amagama abo, ukuthi banempilo engakanani, ngisho nebanga.
I-Escape from Tarkov Item ESP enezihlungi ilungele ukuphanga, njengoba ungakugwema ukuchitha isikhathi sakho ngezinto eziswele futhi umane ugxile ekutholeni izinto ezinhle.
Ukuphunyuka eTarkov ngumdlalo onzima, ukusho okuncane, kepha ukusebenzisa i-EFT Aimbot yethu kuzokuvumela ukuthi uphumelele ngaphandle kwezinsongo ohlangabezana nazo.
Ithrekhi ye-EFT Bullet (esebenza ngamabanga amafushane naphakathi nendawo)
Ungakwazi ukulandela umkhondo wezinhlamvu zakho e-Escape from Tarkov ngokunika amandla isici sethu se-EFT Bullet Track (esilungele isibhamu esithathwe mfushane siye ebangeni eliphakathi).
Umlayezo owenziwe ngezifiso uzoboniswa esikrinini sakho noma kunini lapho isitha siqonde kuwe (noma siseduze nohlamvu lwakho).
Imodi ye-EFT super jump (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe)
Yehla ezindaweni eziphakeme ezingenangqondo ngaphandle kwemiphumela nge-Gamepron! IHack Hack yethu ye-EFT ifaka phakathi neModi Ye-Super Jump evikela ukulimala kokuwa kungakhathalekile ukuthi iphakama kangakanani.
EFT bone & aim key key okulungisekayo
Lungisa i-Escape yethu ukusuka eTarkov Aimbot ukuze isebenze noma ngabe ungathanda! Ngokubekwa phambili kwamathambo nezinye izinto ezilungisekayo, i-Gamepron inakho konke okudingayo ukuze uphumelele.
Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-EFT aimbot
Uma usebenzisa i-Escape yethu evela eTarkov Aimbot futhi ungavumela isici se-Visible Checks, sikuvumela ukuthi uqinisekise ukuthi ushayile (futhi wabulala!) Imigomo yakho.
Amazinga wangempela wokuphinda atholakale e-Escape from Tarkov ayinkinga, kepha ungawasusa ngokuvula i-Recoil Compensator.
Yiba Umdlali Ohamba phambili we-EFT ePlanethi
Umdlalo unzima ngokwanele njengoba unjalo, ngakho-ke ungakwenzi kube nzima kuwe ngokwenqaba ukusebenzisa i-Escape yethu engenacala evela kuma-cheats eTarkov. Onke amathuluzi wethu awatholakali ngokuphelele futhi azokusiza ukuthi uwine ukufana okuningi, akukho lutho oluzolahleka. Uma ngabe wake wafuna ukuzwa ukuthi kunjani ukuba ngunkulunkulu phakathi kwabantu ngenkathi udlala i-Escape from Tarkov, i-Gamepron inesixazululo.
Ukuphunyuka Okudumile Tarkov Hacks and Cheats
Ukubalekela iTarkov Aimbot
Ukubalekela iTarkov ESP naseWallhack
Okunye Ukuphunyuka Tarkov Hacks futhi aphambe
Ngabe ufuna ukuthola ukufinyelela kwe-Escape enhle kakhulu evela eTarkov Hacks engathengwa yimali? Awukwazi ukuthembela kunoma yimaphi amathuluzi wamahhala atholakalayo online ukuletha izithembiso zawo, ingasaphathwa eyokukugcina uphephile ngenkathi usebenzisa ama-cheats. Lapho ufuna izici ezaziwa kakhulu ezitholakala ngaphakathi kwe-Escape from Tarkov Hack, i-Gamepron ukuphela kwendawo ongathembela kuyo - ngenkathi ingazwakala ichemile, izibuyekezo ezivela kubasebenzisi bethu abaqinisekisiwe ziyazikhulumela. Uma kunendlela yokwenza ngcono ekugengeni kwegeyimu usuvele uyazi ukuthi sikuyo, njengoba ikhwalithi yama-hacks ethu izomela ibhizinisi lethu uqobo! Ngezici ezifana ne-Escape from Tarkov Aimbot, i-ESP, iWall Hack, i-NoRecoil, ne-Footprints, sinakho konke okudingayo ukuze ukhiphe iqembu eliphikisayo.
Isikhathi sokutshala imali kwezokuzijabulisa kwakho! Noma ngabe ungumdlali wedwa noma ujabulele ukugembula nabangani, ukusebenzisa i-EFT Hack yethu kuzokwenza isipiliyoni sakho sithokozise kakhulu.
Lapho ama-chip esehlile futhi wonke umuntu oseqenjini lakho efile, kunento eyodwa kuphela ongathembela kuyo kumdlalo ofana ne-Escape from Tarkov - inhloso yakho. Uma ungenayo inhloso enhle kulo mdlalo uzoba nesikhathi esibi, futhi lokho kungenxa yokuthi basebenzise injini enengqondo kakhulu lapho bedala umdlalo. Awukwazi ukuzungeza nje njengomuntu osangene njengoba umuntu engenza uma udlala "umshayeli wokucabanga", uhamba kancane futhi ukuqhuma kwezibhamu kunamandla futhi kunomoya omfishane.
Awukwazi ukuthembela kwizikhali zakho ukuze zikugcine uphila ezimweni eziningi, njengoba abadlali bezogcwala yonke imephu; wonke umuntu ufuna ukubeka izandla empangweni, kepha ukusebenzisa i-EFT Aimbot yethu nge-Bone Prioritization ne-Auto-Aim / Fire kuzokutholela ukushesha (futhi kungalimazi). Izitha zizobe zenza konke okusemandleni ukukunciphisa, kepha unenketho yokunika amandla i-Instant Kill futhi uzibuke zidilika ngokuchofoza okukodwa kwegundane lakho.
Ukuphunyuka kwesokudla okuvela eTarkov ESP ngeke nje kukukhombise indawo yezitha, kuzokunikeza nokufinyelela olwazini lwesitha oluzokuvumela ukuthi uhlele ukuhlasela kwakho kahle. Ungabona lapho isitha sikhona ngezindawo eziqinile nezingabonakali, kepha ungabona nokuthi ngubani igama lazo, ukuthi zinempilo engakanani, nokuthi zikude kangakanani. Ukubalekela abathuthukisi beTarkov ESP neWall Hack bayahluleka ukusebenzisa leli nani lezici kaningi, kepha asesabi inselelo lapha eGamepron!
Ungasebenzisa futhi i-Item ESP enesici sokuhlunga ukuthola ukuthi ngabe yikuphi ukuphanga okuhle kakhulu okucashe khona ngesikhathi sokuhlasela kwakho. Ukuqoqa imfucumfucu yinto yesikhathi esidlule lapho usebenzisa i-Escape yethu eTarkov ESP, njengoba izibhamu ezinhle kakhulu zizogqanyiswa ngisho nasezindaweni ezimnyama kakhulu. Noma ngabe ufuna ukuba ngumphangi osebenza kangcono noma oqhekezayo, ukusebenzisa i-EFT ESP neWall Hack kuyindlela elula yokwenza zombili.
Zingela phansi izitha zakho njengezisulu abazikho ngezici zethu ze-Footprints! Uma othile eshelela noma ekwazi ukudlula kuwe, isici seFootprints singasetshenziswa ukubona ukuthi baya kuphi. Uzoba nomkhondo onyawo okuholela ngqo ezitheni zakho, okuyilapho ungavumela khona imodi ye- "High Damage" futhi ubasuse unomphela ekuhlaseleni kwakho. Ungasebenzisa noma isiphi isikhali osifunayo bese wenza umonakalo omkhulu kakhulu kunabaphikisi bakho, kukunikeze onqenqemeni kunoma yikuphi ukuqhuma kwesibhamu obamba iqhaza kukho. Ukugenca kwethu ngeBanga kufanelekile uma ulandela ezinyathelweni futhi udinga ukwazi ukuthi usondele kangakanani kuwe ' Ukuthola kabusha, into yokugcina oyifunayo ukumangazwa isitha osilandelayo!
Ngokunika amandla i-EFT Hack yethu unikezwa ukufinyelela kuzo zonke lezi zici nokunye okuningi, noma ngabe uzithola ukhuphuka ulwa nabaduni abakanye nawe, uzoba nethuluzi eliphakeme (futhi ngenxa yalokho, phuma phambili!).
Sinezinto ezahlukahlukene ezahlukahlukene ezifakiwe ngaphakathi kwe-Escape yethu evela eTarkov Hack, konke okuzokusiza ukuthi uthathe phansi amaScavs kanye nabadlali bangempela ngokuthula. Zonke izici esike sakhuluma ngazo ngaphambili zizobakhona ku-EFT Hack yethu, kepha lokho kuyisiqalo nje - sinikeza nokuthandwa yi-2D Radar kanye nokuvikelwa kwe-stellar anti-cheat ukugcina wonke ama-akhawunti akho ephephile. Izinhlelo ezizenzakalelayo zokuthola ukukopela ezisetshenziswa ngaphakathi kwe-Escape from Tarkov ngeke zifane namathuluzi ethu, njengoba sikuvumela ukuthi ukhohlise ngaphandle kokuthola imiphumela.
Umsebenzi wethu weNoRecoil ungenye ethandwayo okufanele uyibheke, njengoba i-Escape from Tarkov izoklomelisa labo abanesandla esizinzile. Uma ukwazi ukuthola ama-shots akho ayi-100%, akukho okutshelwayo ukuthi uzokwazi kangakanani ukuqhubeka nokuhlasela okukodwa, ingasaphathwa eyedazini. Uma ufuna ukugaya kube lula e-Escape from Tarkov, ayikho indlela engcono yokuthuthuka.
Hacks EFT Imibuzo
Kungani ama-EFT Hacks ethu
Ukuphunyuka kwethu eTarkov Hack ngeke kulandele umzila wendabuko, okusho ukuthi ungalindela ukubona ikhwalithi ethe xaxa ngamathuluzi esiwakhiqizayo. Izici esizisebenzise ngaphakathi kwe-EFT Hack yethu azitholakali kwenye indawo, okusinikeza insizakalo ekhetheke kakhulu uma kuqhathaniswa nabanye abahlinzeki be-hack. Uma ufuna ukukopela kokubili ngempumelelo nangokuvikelekile, i-Gamepron ihlala iyindlela engcono kakhulu.
Kungani i-EFT Aimbot yethu
Ukusebenzisa i-Escape yethu eTarkov Aimbot kuzokuvumela ukuthi uthathe izitha ngaphandle kokwenza umonakalo, ngoba uzokwazi ukukhomba i-headshot kusuka kumamayela kude. I-EFT Aimbot izokwenzela wonke umsebenzi onzima, ikuvumela ukuthi uhlale phansi uphumule - ukuqoqa impango kanye nokuqhubekela phambili ngeke kuze kuthinteke ekuhloleni izitha.
Kungani i-EFT ESP yethu
Ukusebenzisa i-Escape yethu eTarkov ESP kuzokuvumela ukuthi ubone noma yini ebalulekile, futhi lokho kufaka okungaphezu kwezitha zakho. Ungabona amathambo omdlali ngezindawo eziqinile / ezi-opaque, kepha ungabona nokuthandwa kwesikhali i-ESP, i-ESP eqhumayo, amagama abadlali, ngisho nebanga labo. Akudingeki ucabange ukuthi isitha siseduze, njengoba uzokwazi ngokuqinisekile nge-EFT ESP
Kungani i-EFT Wallhack yethu
Ukubalekela eTarkov kunamakhona amaningi kanye nama-crannies okufanele ukhathazeke ngawo, yingakho i-EFT Wall Hack yethu izokusiza ukuthi ugcine izithukuthuku zakho zingasebenzi. Uzohlala wazi ukuthi izinto ezibalulekile nabaphikisi zitholakala kuphi, njengoba ukwazi ukubona ngqo ezindongeni ngokuthanda - ukubona abaqamekeli abangaba khona kanye nezicupho akusewona umsebenzi othusayo.
Kungani i-EFT Norecoil yethu
Ukunemba kungaba umehluko phakathi kokuwina nokulahlekelwa ukuqhuma kwesibhamu, yingakho sikuvumela ukuthi ususe ngokuphelele ngokunika amandla isici seNoRecoil. Inani lokuphindelela okufanele ubhekane nalo lizohluka ngezikhali, kepha ngokunika amandla umsebenzi weNoRecoil, akudingeki ukhathazeke ngakho kungakhathaliseki ukuthi ukhetha muphi.
Ungawalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu e-EFT?
Sikwazile ukwenza inqubo yokulanda ibe ngeqonde ngqo, njengoba uma usuthole ukhiye wakho womkhiqizo ungalanda i-EFT Hack yakho ngokushesha (ngenxa yokuthi indawo etholakalayo iyatholakala). Okude kunakho konke obekuzodingeka ukuthi ulinde isikhala sokulanda ukuvula kuzoba amahora angama-8 kuye kwayi-9, yize isikhathi esiningi ungalanda ama-cheats ngemuva kokuthenga.
Kungani ama-EFT Hacks wakho ebiza kakhulu kunamanye
Asinikeli ngesipiliyoni se-barebone nge-Escape yethu evela eTarkov Hack, ngoba akuyona nje indlela esisebenza ngayo lapha eGamepron. Njenganoma yini enye oyithengayo, kuzodingeka ukhokhele ikhwalithi - futhi, i-EFT Hack yethu inganikezwa kuphela kwinani elithile labantu ngasikhathi. Phonsa iqiniso lokuthi abatholakala ku-100% futhi inani alibonakali libiza kakhulu!
Akunandaba ukuthi uhlela isikhathi esingakanani ekugenceni, sinesikhathi esikahle sokulingana nezidingo zakho. Singakuthengisela ukhiye womkhiqizo ozosebenza nsuku zonke, masonto onke, noma ngenyanga; noma ngabe uhlela ukugenca isikhashana, noma isikhathi eside, i-Gamepron ingakusiza ukuthi ufinyelele ku-Escape enhle kakhulu evela eTarkov Hacks online. Akunasidingo sokubheka kwenye indawo!
Awesome I-EFT Hack Izici